PET / PA6 / Yakagadzirwa POY Yakakwira Yekumhanyisa Spinning Machines Series
Muchina uyu unonyanya kushandiswa kutenderera 30-330dtex polyester POY.
Inotora LTM mhando pini sikuruu, yemumba-inogadzirwa inoramba ichinyungudika CPF, nokudaro inowedzera hupenyu hwebasa hwekutenderera mapakeji.
Ose ari maviri akasimudzwa-kumusoro uye ezasi-akaisirwa yakakwira-yakamanikidza rectangular uye kapu-yakaumbwa spin mapakeji anowanikwa.
Yakasarudzika mapuraneti anotenderera pombi uye akaparadzana kutyaira kupera mafuta pombi.
Evo uye muchinjikwa kudzima system ine yakaenzana uye yakagadzikana inoyerera kumhanya.
Mumwe nemumwe anodzorwa, kupinza inverter uye zvikamu.
Kugadziridza kutsva GR, kupinza inverter uye zvikamu.
Twin Screw Dryer-isina Vented PET / PLA Sheet Extrusion Line
JWELL inovandudza yakafanana mapatya sikuruu extrusion mutsetse wePET jira, uyu mutsetse wakashongedzerwa ne degassing system, uye hapana chikonzero chekuomesa uye checrystallizing unit. Iyo extrusion tambo ine zvivakwa zvepasi simba comsuption, yakapusa kugadzirwa maitiro uye nyore kugadziriswa Iyo segmented sikuru dhizaini inogona kudzikamisa iyo viscosity kurasikirwa kwePET resin, iyo yakaenzana uye yakatetepa-madziro calender roller inosimudzira iyo kutonhora mhedzisiro uye nekuvandudza kugona uye pepa mhando. Multi zvinoriumba dosing feeder inogona kudzora iyo chikamu chemhandara zvinhu, zvishandiso zvekare uye tenzi batch chaizvo, iro pepa rinoshandiswa zvakanyanya kune thermoforming kurongedza indasitiri.
PP Meltblown Isina-yakarukwa Mucheka Extrusion Line
PP Meltblown Isina-yakarukwa Mucheka unonyanya kugadzirwa ne polypropylene, uye iyo fiber dhayamita inogona kusvika 1 ~ 5 microns. Kune akawanda mavhaid, fluffy chimiro, uye yakanaka anti-kuunyana kugona. Iyi tambo ye ultrafine ine yakasarudzika capillary chimiro inowedzera huwandu uye nzvimbo yepamusoro yemafibhuru pane imwe unit nzvimbo, kuitira kuti meltblown jira riine firita yakanaka yekudzivirira, inodzivirira, kupisa kuputira uye kuyamwa kwemafuta. Inogona kushandiswa muminda yemhepo, emvura firita zvinhu, masiki zvinhu, kudziya kwekudzivirira zvinhu, oiri-inobata zvinhu nezvimwe.
Makuriro ekushandisa: Iyo Bindu, iyo Yekuvaraidza Nzvimbo Yakashongedza Kushongedza uye imwe nzvimbo yenzvimbo yevaranda pavilion; iyo yekutengesa chivakwa chemukati nekunze kushongedza, yemazuva ano guta rekuvaka keteni madziro; Transparent Mhepo Midziyo, mudhudhudhu mafafitera emhepo, ndege, zvitima, ngarava, mota, mota, ngarava dzepasi pemvura uye girazi remauto nemapurisa nhoo; Runhare Booth, Kushambadzira Road Signs, mwenje bhokisi kushambadzira kuratidza kuratidza kuratidza dhizaini; Ruzha zvipingamupinyi pama Expressways uye mumaguta viaducts.
SPC Environmental Protection Floor yekugadzira tambo inoitwa nePV base zvinhu zvakaburitswa ne extruder, PVC vara firimu + PVC yekupfeka-inodzivirira nhete + PVC yepasi firimu yakadzvanywa uye yakanamirwa mune imwe nguva neana roller calender. Chigadzirwa chiri nyore mukuita, chakanamirwa nekupisa uye pasina glue.
JWZ-BM30,50,100,160 Furidzira richigadzirisa Machine
· Inokodzera kugadzira mhando dzakasiyana dzemotokari urea bhokisi, bhokisi rekushandisa, chigaro chemotokari, auto air duct, auto kuyerera bhodhi, bhamba uye Car Spoilers.
Tora yakakwira kuburitsa extrusion system, kuunganidza kufa musoro.
· Maererano nezvakasiyana zvinhu, sarudzo JW-DB imwechete chiteshi hydraulic screen-exchanger system.
· Zvinoenderana nehukuru hwechigadzirwa hwakasarudzika, mhando yeplaten uye saizi
· Optinal hydraulic servo kudzora system.
Kuiswa mucherechedzo pasi pazasi, robhoti yekubvisa.
DYSS imwechete-shaft shredder chishandiso chekupaza ine akasiyana maficha ekushandisa. Iyo yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa marara marara zvemaindasitiri akasiyana siyana. Inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana siyana, kusanganisira akasiyana epurasitiki zvigadzirwa zvakadai semabhuroko, mapaipi uye mabhegi akarukwa, tambo dzakasiyana dzakashandiswa, huni, mapepa ekurasa uye marara emagetsi etc. nhanho inotevera, uye izvo zvakakwenenzverwa zvinogona kudzokororwa zvakananga kana zvekuwedzera kupwanywa.
PC Hollow Sheet Kuwedzeredzwa, Pe Pp Wood -Purasitiki Yekunze Kuwedzera, PC Sheet Kuwedzeredzwa, Kunze Kunyorera, PVC Corrugated Bhodhi, PVC Multi Rukoko Heat Insulation Corrugated Board,